Warbixin: xaaladda abaarta Soomaaliya - BBC Somali
Warbixin: xaaladda abaarta Soomaaliya
18 Agoosto 2011
Waa ku dhowaad bil tan iyo markii Qaramada Midoobay ay ku dhawaaqday in gaajo ay ka jirto qaybo ka mid ah Soomaaliya.
Wixii markaa ka dambeeyay dadaalka dhinaca gargaarka ayaa la laba jibaaray iyadoo lacabo badan lagu yaboohay shalay oo Arbaca ahayd, taasoo ay bixinayaa dalalka reer galbeedka iyo kuwa ururka Islaamka.
Sawirka guud waa mid aan lagu farxeyn. Kumanaan qof ayaa weli ku soo qulqulaya Soohdinta Soomaaliya ay la wadaagto dalalka dersiak aKenya iyo Ethiopia.
Xeryaha halkaasi ku yaalla ayaa lagu soow arramayaa in ay aad u sareyso heerka nafaqo darrada, waxaana Qaramada Midoobay ay sheegayaa in guud ahaan koonfurta Soomaaliya ay u badan tahay in looga dhawaaqo macluul bilaha soo socda.
Laakin meelaha qaar roob ayaa ka da'ay
Hey'adaha gargaarka ee ka shaqeynaya dhulka waxa ay ku soo warramaeen, in dad badan ay ku laabanayaan tuulooyinkooda si ay miro ay u beertaan.
Waxaa sidoo kale jira reer guuraa aad u balaaran oo wata lo iyo geel oo dhinaca xeebta aaday si ay u raadsanadaan daaq cusub.
Si kasataba ha ahaatee hawlaha ugu muhiimsan waxa ay ka socdaan dalka Uganda.
Madaxweynaha Eritrea Isaias Afeworki ayaa waxa uu wada hadal saddex maalmood ah la leeyahay, madaxweyne Yoweri Museveni oo marti gelinaya.
Ciidamada waddanka Uganda ayaa waxa ay yihiin kuwa ugu badan ee ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee dhulka ku haya dowladda Soomaaliya, waxaan ay is hayaan al-Shabaab oo dagaalyahaniinteeda Islaamiga ah ay taageeri jirtay Eritrea.
Haddii labada Madaxweyne ay gaaraan wax horumar ah oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa colaadda iyo dagaalka Soomaaliya, oo isagu saameynaya habsami u socodka gargaarka iyo sidii wax loo gaarsiin lahaa dadka dhibaateysan, ayaa xaaladda sidan u qasan oo kale waxa ay u noqoneysaa guul weyn.